Xukuumadda DDS Oo Faahfaahin Ka Bixisay Qaabkii Loo Qabtay Xasan Dheere - Jigjiga Online
HomeSomalidaXukuumadda DDS Oo Faahfaahin Ka Bixisay Qaabkii Loo Qabtay Xasan Dheere
Xukuumadda DDS Oo Faahfaahin Ka Bixisay Qaabkii Loo Qabtay Xasan Dheere
Jigjiga (JigjigaOnline) – Dawladda Deegaanka Soomaalida ayaa ka hadashay qaabkii loo qabtay dambiile Xasan Ismaaciil Ibraahim (Xasan Dheere) oo shalay ay ciidamada ammaanku gacanta kusoo dhigeen kaddib siddeed bilood oo uu dhuumaalaysanayey.
Xasan Dheere iyo saraakiil kale oo tacaddiyo ka dhan ah xuquuqda binu aadamka ka galay shacabka ayaa ka baxsaday dalka markii xilka laga qaaday madaxweynihii hore Cabdi Maxamuud Cumar (Cabdi Iley) oo ku xidhan magaalada Addis Ababa, maxkamadna kaga socoto.
Xasan Dheere iyo saraakiisha kale ee dhibaatada badan u geystay shacabka deegaanka ayaa u baxsaday dhinaca Somaliya, halkaas oo ugu dambayn laga soo qabtay sarkaalkan oo ahaa ninkii xukumayey Jeel Ogaadeen oo lagu ciqaabi jiray dadka, sidoo kalena, Cabdi Iley u qaabilsanaa ciqaabta dadka lagu xidho xabsigaas.
Xukuumadda DDS ayaa war ay maanta soo saartay waxay faahfaahin kaga bixisay qaabkii ay gacanta ugu soo dhigeen Xasan Dheere iyo dembiyada loo haysto.
Xafiiska Nabadgelyada Maamulka iyo Cadaaladda DDS oo war kasoo saaray ayaa waxa uu sheegay in Xasan Dheere laga soo qabtay xuduudka Itoobiya iyo Somaliya, halkaas oo ciidamadu ay gacanta kusoo dhigeen isagoo hubaysan.
Xafiiska Nabadgelyada Maamulka iyo Cadaaladda DDS waxa uu xusay in markii la qabanayey dembiilahan, inuu ku hubaysnaa baastoolad, laakiin ma sheegin inuu is difaacay iyo sida ay ugu suurtogashay soo qabashadiisu.
Sidoo kale, warkan laguma sheegin in ciidamada maamul goboleedka Puntland ay gacan kasiiyeen soo qabashada Xasan Dheere iyo in kale, sidoo kalena lama xusin inuu isku dayey inuu is difaaco iyo in kale, iyo waliba inuu gaadiid watay iyo in kale.